Midowga Afrika oo Soomaaliya iyo Itoobiya ku amaanay dadaallada nabadeed oo ay wadaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Midowga Afrika oo Soomaaliya iyo Itoobiya ku amaanay dadaallada nabadeed oo ay...
Midowga Afrika oo Soomaaliya iyo Itoobiya ku amaanay dadaallada nabadeed oo ay wadaan
Muqdisho (SNTV)- Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan Waddamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee ay ku doonayaan in xal kama damebys ah looga gaaro colaadda u dhaxeysa dalalka Eritrea iyo Jabuuti.
Guddoomiyaha Midowga Afrika Musa Faki Maxamed ayaa qoraal uu ku qoray Bartiisa Twitterka ku sheegay in uu u soo dhaweeynayo dadaalka xoogga leh ee diblomaasiyadeed ee ka socda Geeska Afrika.
Waxaa uu Musa Faki intaas ku daray in booqashada Hoggaamiyayaasha Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku tageen Eritrea shantii Bishan oo ay xigtay booqashada Wasiirrada arrimaha dibadda ee Eritrea,Somaliya iyo Itoobiya ku tageen Jabuuti ay tahay wax aad loogu farxo lana bogaadiyo.
Mr Faki Maxamed ayaa ku waaniyay dalalka geeska Afrika ee afarta ah in ay sameystaan iskaashi dhaqaale,amaan iyo mid Ganacsi oo xoog leh, meelna iska dhigaan wax yaabaha murannada yar yarka ah ee u dhaxeeya.
Previous articleDuqeyn lagu dilay horjooge ka tirsan Al-Shabaab
Next articleSacuudiga oo ku biiray waddamada xalka u raadinaya Eritrea iyo Jabuuti.